Rava ny « bande de Sardo » : mbola mpianatra ireo mpanendaka ao Toamasina | NewsMada
Mpianatra mbola tsy ampy taona telo lahy tratran’ny Fip tany Toamasina, mpanendaka mahery vaika. Izy ireo no antsoina hoe « bande de Sardo », izay lehibe mpitarika azy ireo…
Nisesisesy tao anatin’ny telo volana ny fanendahana amin’iny lalam-baovaon’ny Tanambao fahadimy mivantana hatrany Ambolomadinika Toamasina iny. Maro ireo nahita faisana na mpandeha an-tongotra, na moto, hatramin’ny mpandeha fiara aza. Fiarana raim-pianakaviana, tale jeneraly amin’ny orinasa tsy miankina iray very “auto radio” sy fitaovana maro tao anaty fiara, ny zoma teo, raha mbola variana tao amin’ny trano fisotroana ny tenany. Toy
Ny famotorana ihany no nahalalana fa mihinana fanafody “rivotril” sy zava-mahadomelina izy ireo mialohan’ny hanaovany asa ratsy.